पाठेघरको क्यान्सरका लक्षण केके हुन्,... :: डा. एलिजा श्रेष्ठ :: Setopati
डा. एलिजा श्रेष्ठ गाइनोअंकोलोजिष्ट
क्यान्सर भनेको जुनसुकै अंगमा सामान्यभन्दा धेरै कोषिका बढ्ने हो। पाठेघरको मुखको क्यान्सर पनि सामान्य कोषिकाभन्दा बढी भएर हुने हो। पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनेको 'एचपिबी' भाइरसले गर्दा हुने रोग हो। हुन त यो साधारण भाइरस हो। रुघाखोकी लाग्दा हुने जस्तै सामान्य भाइरस हो।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने भाइरसलाई नम्बर १७ र १८ भनिन्छ। यो भाइरसले मान्छेलाई आक्रमण गरिरहेको हुन्छ । तर यदि त्यो भाइरस शरीरमा ३० वर्षको उमेरपछि पनि ५ देखि १० वर्षसम्म रहिरह्यो भने पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ। सुरूमा पत्ता लगाइयो भने यो क्यान्सरबाट जोगिन सकिन्छ।
यसबाट जोगिनका लागि पाठेघरको मुखको पानीको परीक्षण गर्नुपर्छ। भिआइए परीक्षण गर्नुपर्छ त्यसमा नराम्रो कोषिकाहरू बढेको छ कि छैन पत्ता लगाउनुपर्छ। एचपीबी डिएनएको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। यसको परीक्षणले भाइरस सक्रिय छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। जसले गर्दा पाँचदेखि १० वर्षको बीचमा क्यान्सर लाग्छ कि लग्दैन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले हरेक महिलाहरूले यसको परीक्षण गर्नुपर्छ।
सुरूआती चरणमा पत्ता लगाउन सकियो भने क्यान्सरबाट जोगिन सकिन्छ। तर अस्पतालमा महिलाहरू आउन ढिलो गर्छन्।
९ देखि १३ वर्षको उमेर समूहकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरूद्धको खोप लगाउन सकिन्छ। निजी अस्पतालहरूमा यो सेवा उपलब्ध भइसकेको भए पनि सरकारी तवरमा भने उपलब्ध छैन। निकट भविष्यमा सरकारी अस्पतालहरूमा पनि यो सेवा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विकसित देशहरूमा त यो खोप लगाइएका कारण पाठेघरको मुखको क्यान्सरको समस्या कम हुँदै गएको छ।
विकराल बन्दैछ यो समस्या
नेपालमा यसका रोगीको संख्या यति नै छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। यही समस्याका कारण महिलाहरूको सबभन्दा बढी मृत्यु हुने गरेको छ। महिलाको मृत्युको दोस्रो कारण स्तन क्यान्सर हो। हरेक वर्ष २ हजारभन्दा बढीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसमध्येमा १ हजार महिलाको त्यही रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको छ।
(डा.श्रेष्ठ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत छिन्)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २५, २०७६, ११:४०:००